Yintoni i-Photomontage kwiWorld World?
UbuGcisa bobuGcisa History History
Yintoni i-Photomontage kwi-Art?
by Bhete Gersh-Nesic
Iingqungquthela ezidibaniswe neefoto ezihlanganisiweyo
I-Photomontage ngumhlobo wobugcisa be-collage . Iqulunqwe ngokukodwa kwiifoto okanye iinqununu zeefoto ukwenzela ukuba uqondise ingqondo yombukeli kwiinkcukacha ezithile. Iziqwenga zivame ukwakhiwa ukuze zidlulisele umyalezo, nokuba ngaba uhlalutyo malunga nezopolitiko, ezentlalo okanye ezinye izinto. Xa zenziwe ngokuchanekileyo, zinokuba nefuthe elimangalisayo.
Kukho iindlela ezininzi ezenziwa ngayo i-photomontage.
Ngokuqhelekileyo, iifoto, iimpapasho zephephandaba kunye namaphephancwadi, kunye namanye amaphepha afakwe kwi-surface, enikela umsebenzi wokwenene u-collage. Amanye ama-artists angabandakanya iifoto kummandla omnyama okanye ikhamera kunye nobugcisa bezithombe zanamhlanje, ngokuqhelekileyo ukuba imifanekiso yenziwe ngokubhaliweyo.
Ukuchaza iPhotomontage Ngexesha
Namhlanje sivame ukucinga nge-photomontage njengendlela yokusika kunye nokudibanisa ukudala ubugcisa. Sekunjalo, kwaqala ukuqala kwimihla yokuqala yokufotowa njengokuba ubugcisa beefoto babedlala nento ababebiza ngokuba ngumshicileli wokudibanisa.
U-Oscar Rejlander wayengomnye walaba baphathi kunye necandelo lakhe "Iindlela ezimbini zoBomi" (1857) yenye yeyona mizekelo eyaziwa kakhulu kulo msebenzi. Wafotela imodeli nganye kunye nemvelaphi kunye nokudibanisa ngaphezu kwamanqaku amathathu emkhatsini wamnyama ukuze enze ukuprintwa okukhulu kunye neenkcukacha. Kuza kuthatha ulungelelaniso olukhulu ukukrazula lo mfanekiso ngomfanekiso omnye.
Abanye abathathi beefoto badlala nge-photomontage njengoko iifoto zikhutshwa.
Ngamanye amaxesha, sabona amakhadikhadi abhwele abantu belizwe elikude okanye imifanekiso enekhanda elilodwa kumzimba womnye umntu. Kwakukho izidalwa ezithile zeengingqi ezidalwe ngokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo.
Ezinye ze-photomontage umsebenzi ngokucacileyo zidibene. Izinto zigcinwa ngolu hlobo lokuba zigqitywe kumaphephandaba, iposi neeprintshi, ezo zininzi.
Le ndlela yindlela yokwenyama.
Olunye umsebenzi we-photomontage, njenge-Rejlander's, aluhlanganisi ngokukhawuleza. Endaweni yoko, izinto zihlanganiswe kunye ukudala umfanekiso ohambelanayo owenza isohlo. Umfanekiso owenziwe kakuhle kule ndlela yenza umntu azibuze ukuba ingaba i-montage okanye umfanekiso ochanekileyo, eshiya abaninzi ababukeli ukuba banqume indlela umculi enza ngayo.
Dada Abaculi kunye nePonomontage
Phakathi komzekelo omhle wokusebenza komsebenzi we-photomontage ngumsebenzi we- Dada . La ma-agitators olwachasayo ayeyaziwa ngokuvukela yonke imixholo eyaziwayo kwihlabathi lobugcisa. Uninzi lwabaculi beDada baseBerlin bazama ukujonga i-photomontage malunga ne-1920s.
UHana Höch (waseJamani, ngo-1889-1978) " Sika ngeKhiza yeKiko kwi-Beim weBlack Beer-Belly Cpopovic YaseJamani " (1919-20) ngumzekelo opheleleyo weDada-style photomontage. Ubonisa umxube we-modernism (ubuninzi bamashishini kunye nezinto eziphezulu zobugcisa bexesha) kunye "nomfazi omtsha" ngokusebenzisa imifanekiso ethathwe kwiBeller Illustrierte Zeitung , iphephandaba elipapashwe kakuhle ngeli xesha.
Sibona igama elithi "Dada" liphindaphindiwe ngamaxesha amaninzi, kuquka enye ingentla kwesithombe sika-Albert Einstein kwicala lasekhohlo. Ephakathi, sibona umdlali we-ballet we-pirouetting olahlekelwe yintloko yakhe, ngelixa intloko yomnye ikhupha ngaphezu kweengalo zakhe eziphakanyisiweyo.
Intloko ejikelezayo yifoto yomculi waseJamani uKäthe Kollwitz (1867-1945), uprofesa ngowokuqala oqeshwe kwi-Berlin Art Academy.
Umsebenzi we-Dada photomontage artists wasecolitiki. Iingqungquthela zabo zazijonge ukuxhalabisa kwiMfazwe Yehlabathi I. Ininzi yale mifanekiso yafunyanwa kwiimidiya zamatye kwaye igalelwe imilo engabonakaliyo. Amanye amacwecwe kule ntshukumo aquka amaJamani uRaoul Hausmann noJohn Heartfield kunye noRussian Alexander Rodchenko.
Abaculi abangakumbi bathatha iPhotomontage
I-Photomontage ayizange ime kunye nabaDadesi. Abagqithisileyo njengoMay Ray noSalvador Dali bawuthatha njengabanye abaculi abangabaninzi kwiminyaka ukususela ekuqaleni kwawo.
Nangona abaculi abambalwa banamhlanje beqhubeka nokusebenza ngezinto eziphathekayo kwaye banqamle kwaye banamathele ndawonye iziqulatho, kuya kuba nzima kakhulu ukuba umsebenzi wenziwe kwikhompyutha.
Ngeenkqubo zokuhlela umfanekiso ezifana ne-Adobe Photoshop kunye nemithombo engenakulinganiswa yesithombe esitholakalayo, abaculi abangekho kuphela kwiifoto eziprintiweyo.
Uninzi lwalezi zixhobo zanamhlanje zikhupha ingqondo, zolulela kumbono apho abaculi badala ihlabathi elifana neliphupha. Iingxelo zihlala zifuna ininzi yezi ziqwenga, nangona ezinye zijonge nje ukwakha umculi wehlabathi leengcamango okanye izigcawu ze-surreal.
Imbali yobuGqirha 101 - Ukuhamba ngokukhawuleza nge-Eras
Ngaphambi Kokubhala I-Essay kwi-Impressism
Ubugcisa be-Italy kwi-Royal Collection - i-Baroque
Isizathu sokuba iFlorence ibe yiziko lobugcisa bokubuyisela isiTaliyane
Ukuchaza i-Portraits Portraiture kwi-Art
I-Element of Space kwi-Artistic Media
ULeonardo, uMichelangelo noRafael: Ubugcisa bobuNtshatsheli obuPhakamileyo baseNtaliyane
5 Abaculi abadumileyo abahlala neengqondo zengqondo
Abaculi kwi-60 Seconds: uJohannes Vermeer
Ithenda yoBugcisa - Ukukhupha
Iingxowa ezisixhenxe ezibulalayo kwi-Theory and Practice
Indlela yokufumana izihlalo ezilungileyo kwi-Theater
"Ndingayifumana njani iKhadi leeNgqesho?"
Iingcebiso zokunqoba ingxabano malunga nokuziphendukela kwemvelo
Biography yeAlvar Aalto
Inkolo yama-Aztec - iiNkalo eziPhambili kunye noThixo weMandulo yaseMexico
IWashington neLee University Admissions
Iimpawu zemivo kunye namazwi
Yintoni i-Occlusion Occlusion Weather Front?
Indlela yokwenza i-Dumbbell Fly Exercise
Ukuchaza iGalufo yeZigalo zeNkundla yeeNkundla
Iingcaphuno ezingama-30 malunga nokwazi
Indlela Yokungenisa Imoto Eyetyenzisiweyo okanye Iilori ezisetyenzisiweyo ezisuka eCanada
Inkcubeko yeCocoa Bean
Indlela yokufunda kwi-LSAT
Jason Crabb Biography
"I-Hungry Caterpillar" e-Eric Carle
I-crustaceans, i-Subphylum Crustacea
Imfazwe yaseSan Jacinto
UCharles Carroll uchongiwe: Iingcaphuno eziveza i-Creative Genius
I-WWF PPV Iziphumo ze-2001
Yakha indawo yoFundo
Ukusebenzisa i-PHP kunye ne-HTML kwikhasi elifanayo